Imi vanhu munoziva kusarura kwandinoita kushamwari dzangu paFormstack se online fomu anovaka, asi seanomiririra, hatiwanzogara tichishanda nemaapps atinoda. Nhasi, takaendesa peji rekumisikidza peji rekambani yatove nayo Wufoo yakanyatsobatanidzwa mukutungamira kwavo kwekutungamira maitiro.
Chimwe chezvinhu chatinogara tichivimbisa ndechekuti isu tione kuti yega inotungamira inotsvagirwa sei kuti tikwanise kushandisa bhajeti yakakodzera kune yega svikiro uye nekuwedzera zvinotungamira tichichengeta mutengo pamutungamiri pasi. Uchishandisa yepamhepo fomu anovaka saWufoo, unogona kufunga kuti hazvigoneke kumisikidza yakavanzwa munda uye fungidzira munda iwoyo… Zviri nyore chaizvo.
Wedzera munda mutsva uye gadza iyo CSS kiyi kiyi kune yakavanzwa. Izvi zvichave nechokwadi chekuti munda hauna kumbobvira waratidzwa pane fomu zvisinei nekuti yakagovaniswa sei.